Precision machining partsIintonga zeTungsten CarbideIintambo zeTungsten CarbideCarbide burrsI-Tungsten Carbide iyafaIzixhobo zeMigodi yeTungsten CarbideIiBladi zeTungsten CarbideAbasiki bePDCCarbide Ball kunye nezihlaloHardfacing material
Umzobo weTungsten carbide uyafa owenziwe ngetungsten carbide kunye necobalt. Inokumelana nokunxiba kakuhle, ukomelela okuphezulu. Emva koko isetyenziswa ngokubanzi ukuzoba intsimbi, ubhedu, intsimbi engatyiwa, ucingo lwe-aluminium kunye netyhubhu.
Sinomzi-mveliso okhethekileyo kwi-tungsten carbide, sibonelela nangezinye iimveliso ezininzi esingenako ukuzivelisa. uzibophelele kwiimveliso ezizezona ziluncedo kumntu ofuna ukufumana umgangatho olungileyo kunye neemveliso zamaxabiso angcono.
I-advanges yomzobo wethu iyafa
● Ixesha lokuhambisa likhawuleza.
● Umgangatho ozinzileyo nothembekileyo.
● Amava emveliso.
● 100% virgin ekrwada.
● Ubukhulu obahlukeneyo kunye neentlobo.
● Akunanto okanye ukuchaneka kugqityiwe.
● Izixhobo zokuvelisa eziphucukileyo kunye nezixhobo zokuvavanya.
Umzobo wetyhubhu we-carbide uyafa kwinqanaba: YG8, YG11
IBanga Density(g/cm3) Ukuqina (HRA) TRS(MPa)
YG6 14.90 >90.5 >1860
YG6X 14.90 >91.7 >1800
YG8 14.80 >89.5 >2400
YG11 14.40 >97.5 >2600
Ubungakanani obuqhelekileyo kunye nohlobo lomzobo wetyhubhu luyafa (nathi singenza njengeemfuno zakho)
Uhlobo Ubungakanani beNibs (mm) Uluhlu lomngxuma(mm)
S13 40 25 10.5~15.5
50 28 16.5~24.5
60 35 25.5~34.5
75 35 35.5~43.5
90 35 45.0~57.0
110 40 59.0~69.0
W107 28 20 5.8~10.5
W108 35 25 10.0~13.0
W109 38 26 13.0~16.0
W110 48 30 16.0~20.0
W111 59 35 20.0~26.0
W112 70 40 26.0~32.0
● Umzobo wetyhubhu engenanto.
● Umzobo wetyhubhu ogqityiweyo uyafa.
● Umzobo we-tungsten carbide tube uyafa kunye nentsimbi yentsimbi.
Idilesi:I-Huanghe North Road, iSithili saseTianyuan, isiXeko saseZhuzhou, kwiPhondo laseHunan, eChina. 412000
Ukuqina okuphezulu kwe-tungsten carbide ...
I-Wholesale tungsten isamente carbide ku...
Ukuchaneka okuphezulu kweTungsten Carbid...
Umzobo weTungsten Carbide Wire Die Nibs...
Nceda uthumele umyalezo kwaye siza kubuyela kuwe!
Amasuntswana etshizi eCarbide
Iingcebiso zeCarbide zokwakha
Iingcebiso zeCarbide zejoloji
EYONA EMVELISO EZISEMNANDI
K10 K20 K30 K40 Iintonga ze-carbide
IiBurs ze-Cemented Carbide Blank Fo
Umzobo weTungsten Carbide Ufela umz
umgangatho ophezulu we-carbide stri
I-Huanghe North Road, iSithili saseTianyuan, isiXeko saseZhuzhou, kwiPhondo laseHunan, eChina. 412000
Ifowuni : 0086 181 7339 2980